कल्पना दाहाल र प्रदिप रोक्का दोहोरी च्याम्पि यन जि तेपछि रुदै मिडियामा,दोहोरी च्याम्पियनकै बेलामा थपियो यस्तो पि: डा! (भिडियो सहित) – Ap Nepal
March 28, 2021 1059
कमल सरगम-काठमान्डौ,गायिका कल्पना दाहाललाई फेरी अर्को पिडा थपिएको छ।कल्पना दाहाल र प्रदिप रोक्का बिजयी भएपछि एकसाथ मिडियामा आएका हुन् दोहोरी च्याम्पियनको पहिलो राउण्डमा उनीहरु बिजयी भएका थिए भने अब उनीहरु दोश्रो राउण्डमा झन् कडा रुपले देखिनु पर्ने छ।
पहिलोपटक दुवै जनाको अन्तरबार्ता रोएरै सकिएको छ।परिवारको पिडा र गरिबीलाई सम्झेर प्रदिप रोक्का त भक्कानिएरनै रोएका थिए भने कल्पना पनि रुन थालिन।
Prevसुन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ , तोलामा कति घट्यो की बढ्यो त? हेर्नुहोस
Nextनेपाली सेयर मार्केटमा यी कम्पनीको सेयर मूल्य किन हुन्छ सर्वाधिक महँ गो,यस्तो छ भित्रि रह स्य!
अन्ततः पल शाह पुर्पक्षका लागि जेल चलान, यस्तो छ पल शाहलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदा लतको आदेश